CBD menaka ho an'ny mony | Vahaolana CBD tsara indrindra amin'ny taona 2020
CBD menaka ho an'ny mony
Inona no mahatonga ny mony?
Fomba fampiasana solika CBD ho an'ny mony
Ahoana no itondran'ny solika CBD ny mony?
Ny mony dia iray amin'ireo toe-javatra misy ny hoditra izay misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny tanora maro, fa na isika izay tsy tanora intsony dia gaga amin'ny fitsangatsanganana tsindraindray.
Ny olan'ny hoditra toy ny mony dia mahatonga antsika hampiasa zavatra simika hanandramana sy hamongorana ny zits. Saingy matetika ireo akora ireo no miteraka fahasosorana bebe kokoa amin'ny hoditra. Na izany aza, misy akora voajanahary izay mety ho valin'ity olan'ny hoditra ity.
Ny Cannabidiol na ny CBD dia malaza amin'ny anarana hoe iray amin'ireo fitambarana zato mahery antsoina hoe cannabinoids izay hita ao amin'ireo zavamaniry Cannabis Sativa. Cannabidiol dia malaza amin'ny toetrany manohitra ny adin-tsaina, manohitra fanahiana, manohitra ny fanaintainana ary manala fanaintainana.
Tsy toy ny tetrahydrocannabinol na THC fanta-daza, izay cannabinoid mavitrika amin'ny rongony, ny cannabidiol dia tsy misy effets psychoactive, izany hoe tsy hampisondrotra anao na oviana na oviana izany.
Raha ny tokony ho izy, ity akora mahavariana ity dia heverina fa manana karazan-tsoa ara-pahasalamana marobe, noho ny fifandraisany amina rafitry ny vatana izay tsy fantatra 30 taona lasa izay.
Ny rafitra endocannabinoid (ECS) dia rafitra famantarana misy amin'ny biby mampinono, izay mifehy ny asan'ny vatana isan-karazany, ao anatin'izany ny fahazotoan-komana, fahatsiarovana, fanaintainana, fihetseham-po, ary maro hafa. Ary izay rehetra mandray anjara amin'ny homeostasis na ny fifandanjana ara-pahasalamana. Ny vatantsika dia mamorona endocannabinoids, izay neurotransmitter izay mandefa hafatra amin'ireo mpandray amin'ny vatantsika mba hanao hetsika.
Amin'ny fomba mahatalanjona, ny fitokonabinoidana ao amin'ny zavamaniry Sativa rongony dia manahaka ny asan'ny endocannabinoids. Cannabinoids toy ny cannabidiol na marika fotsy fotsy CBD dia mifandray amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana isan-karazany ary mety ho vahaolana ho an'ireo olona mijaly amin'ny olana amin'ny hoditra toy ny mony.
Ny vatantsika dia manafina akora misy menaka antsoina hoe sebum amin'ny alàlan'ny fihary sebaceous ao ambanin'ny hoditra. Ny tanjon'ny sebum dia ny hitazomana ny hoditry ny hoditra ary hisorohana azy tsy ho maina. Io sebum io dia mamakivaky ny folikelin'ny volo ary mivoaka amin'ny mason-koditra.
Fa miaraka amin'ny sebum, ny follicle volo koa dia mandoaka sela maty amin'ny vatana. Rehefa be loatra ny sebum sy ny sela, dia mety hikatona ny mason-koditra. Izany dia manangana bakteria be loatra, izay mahatonga ireo teboka mamaivay fantatsika ho mony.
Anisan'ny antony hitrangan'izany, afaka mahita isika:
Ireo mason-koditra voahitson'ny sela maty: Ny sela maty be loatra navotsotra indray mandeha dia mety miteraka fananganana sela sy sebum mifampitohy ary manentsina ny mason-koditra.
Sebum tafahoatra: Ny sebum be loatra dia afaka manakana ny mason-koditra, mampody menaka ny hodi-doha ary mamokatra menaka be loatra amin'ny hoditra, izay hitarika zits sy teboka.
Bakteria tafahoatra: Rehefa misy ny fanakanana ny hoditra, dia hitombo ny bakteria misy amin'ny hoditra, mitambatra amin'ny sebum ary mitarika fivontosana.
Hormones tafahoatra: Mitombo ny testosterone mandritra ny fahamaotiana ka mahatonga ny fihary atiny hivelatra ary hamokatra sebum bebe kokoa.
CBD fanadio tarehy sy mony
Betsaka ny fomba fampidirana menaka CBD ao amin'ny vatanao ary hampandeha azy. ka afaka mandeha miasa izy io. Ny fomba rehetra dia hahatonga ity fitambarana hifaneraserana amin'ny receptor ao amin'ny vatanao ity mba hahitana vokatra, fa amin'ny tranga manokana ny mony, ny lohahevitra no safidy tianao indrindra.
Misy isan-karazany ny menaka, menaka fanosotra, serum ary balsama misy herin'ny cannabidiol isan-karazany. Ny menaka CBD dia azo zahana ary afaka miditra mora foana amin'ny hoditra ny fihary ao. Ny loha-hevitra CBD, indrindra ny azo avy amin'ny hemp no safidy tsara indrindra ho an'ireo olona mijaly noho ny mony satria misy menaka amine tena ilaina ao koa ny menaka voa hemp.
Capsules dia fomba iray mora sy mahomby amin'ny fihinanana menaka CBD. Manana tanjaka isan-karazany izy ireo ary maharitra 8 ora ny vokany.
Ny felam-boninkazo na e-ranon-javatra dia manome vokatra haingana satria ny etona dia mizotra mankany amin'ny havokavoka ary avy eo mankany amin'ny lalan-drà amin'ny alàlan'ny fitrohana ny pulmonary. Manafana ny vokatra ny etona fa tsy mandoro azy, noho izany tsy misy zavatra poizina hiditra ao amin'ny vatanao.
Ny tetika dia alaina amin'ny fomba miovaova. Izy ireo dia misy amin'ny tanjaka isan-karazany, tsy misy afa-tsy amin'ny fidirana terpene ary tonga amin'ny tsiro isan-karazany.
Ho an'ireo olona mety tsy te / handefitra ny tsiron'ny tincture menaka CBD, misy ihany koa ny CBD amin'ny endrika sakafo, zava-pisotro ary tsakitsaky. Manome anao fatra maharitra 8 ora ny edibles CBD. Azonao atao aza ny manamboatra sakafo any an-trano amin'ny alàlan'ny tincture.
Ny hetsika CBD amin'ny ECS amin'ny hoditra dia mahatalanjona toy ny zavamaniry niavian'io. Anisan'ireo "hetsika fanoherana ny mony" an'ny CBD, azontsika atao ny manonona:
Ny CBD dia voalaza fa manakana ny fiasa lipogène an'ny endocannabinoids anandamide sy 2AG, izay vokarina ao amin'ny fihary sabaceous ary mihetsika amin'ireo mpandray CB2, tompon'andraikitra amin'ny famokarana sebum be loatra. CBD mifehy ny famokarana sebum.
Ny menaka CBD dia misy vokarin'ny bakteria miavaka, ary afaka manafoana ireo bakteria manodidina ny toerana misy ny aretina.
Ny voka-dratsin'ny menaka CBD dia manakana ny mpiasan'ny “pro-acne” tsy hitombo ny cytokine pro-inflammatoire.
Manampy amin'ny holatra mony ve ny CBD?
Ny menaka CBD lohahevitra natsofoka tamina hemp hemp dia manana toetra manasitrana izay manatsara ny endrika sy ny toetran'ny hoditra raha ampiasaina indroa isan'andro mandritra ny telo volana farafahakeliny.
Miasa amin'ny mony amin'ny vatana ve ny CBD?
Ny menaka CBD dia voalaza fa miasa amin'ny mony amin'ny vatana ihany koa. Ny tratra dia mety hitranga eo amin'ny hatoka, soroka, lamosina ary tratra satria ireo faritra ireo dia misy fihary mony mihoatra ny ambin'ny vatana.
CBD dia afaka mampihena ny fitrandrahana sebum izay miteraka ny bakoka izay miteraka zits. Izy io koa dia mampihena ny isan'ny bakteria miangona eo amin'ny toerana misy ny aretina ary mampihena ny fivontosana miaraka aminy.
Afaka manampy amin'ny olan'ny hoditra hafa ve ny CBD?
Ny hoditra, izay taova lehibe indrindra ao amin'ny vatana, dia misy ny rafitra famantarana molekiola ECS ao anatiny. Voaporofo fa nifandray tamin'io ny CBD. Ny vokatra manohitra ny bakteria, antioksida, anti-mikraoba, ary ny anti-milaza zavatra amin'ny CBD dia manampy amin'ny fandanjana ny fahasalamana ary afaka manampy amin'ny fampihenana / fanamaivanana ny toe-pahasalamana hafa toy ny psoriasis, dermatitis, ary ny hoditra maina sy mangidihidy.
Raha mbola mitohy ny fikarohana, ny CBD dia naseho fa manana fahaiza-manao lehibe hanasitranana toe-javatra maro amin'ny hoditra, ao anatin'izany ny mony, amin'ny fampihenana ny famokarana sebum sy ny fivontosana ary ny fanafoanana ireo bakteria
Tsy misy mpitsabo mpanohitra mony hafa mampitaha ny CBD amin'ny fahombiazana. Tsy izany ihany fa io cannabinoid io dia naneho fandeferana lehibe amin'ny olombelona ary tsy mahasosotra ny hoditra.
Ny mony sy ny hoditra hafa dia tsy tokony hisy fiantraikany ratsy amin'ny fiainantsika amin'ny fomba ratsy loatra, fa rehefa manomboka miantraika amin'ny fahasalamantsika ara-tsaina dia tonga ny fotoana hikaroham-bahaolana voajanahary toy ny CBD.
PreviousPrevious post:CBD, VIRUS CORONA ARY ny tsy fisianaManarakaNext post:6 Vokatra fikarakarana hoditra CBD tsy maintsy ananana XNUMX raha mipetraka any New York ianao